" အမေ ဒီနေ့ ဆုံးတယ် ။
ဒါမှမဟုတ် မနေ့က ဆုံးတယ် ။
ကျွန်တော် မသိဘူး "
" Mother died today. Or maybe yesterday. I don't know "
ဒါဟာ အဲလ်ဘတ် ကမူး(Albert Camus) ရေးတဲ့ The Stranger ဆိုတဲ့ ဝတ္ထုရဲ့ အဖွင့် စာသားတွေ ဖြစ်ပါတယ် ။
ကျွန်တော့် အကြိုက်ဆုံးတွေထဲက တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် ။
စာရေးသူဟာ ရှင်သန်နေရတာဟာ ဘာ့အတွက်ဆိုတဲ့ မေးခွန်းနဲ့ နေထိုင်ပါတယ် ။နောက်ဆုံးမှာ သူရသွားတာက ဘယ်အရာက ဘယ်လိုပဲ အဆုံးသတ်သတ် ၊ ဘာက ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ် အဓိပ္ပာယ်မရှိဘူး ဆိုတဲ့ အရာပါပဲ ။Absurdism ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်မဲ့ဝါဒကို လက်ကိုင်သွားသူဖြစ်ပါတယ် ။
အတွေးအခေါ် ပညာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး သူပြောဖူးတာရှိပါတယ်
" အသက်ရှင် နေထိုင်ဖို့ တန်ရဲ့လား ၊ မတန်ဖူးလား ဆိုတာက အတွေးအခေါ်ပညာရဲ့ အခြေခံအကျဆုံး မေးခွန်းဖြစ်တယ် ။
အဲ့ အတွေးအခေါ်ပညာမှာမှ အရေးပါ ၊ အရာရောက်ပြီး
ဖြေရှင်းဖို့ ခက်ခဲတဲ့ အကြောင်းအရာက တစ်ခုပဲရှိတယ် ။
အဲ့တာက မိမိကိုယ်ကိုယ် သတ်သေခြင်းပဲ "
သူဟာ ၁၉၅၇ခုနှစ်ရဲ့ စာပေနိုဘယ်လ်ဆုကို ရခဲ့သူဖြစ်ပါတယ် ။ကံဆိုးလှစွာပဲ အသက် ၄၆နှစ်မှာ ယာဉ်မတော်တဆနဲ့ ဆုံးသွားခဲ့ပါတယ် ။
စာရေးသူ‌အကြောင်း အရင်ပြောရတာက ဒီစာအုပ်မှာ သူ့ခံယူချက်တွေကို အားလုံးပေါအောထားသလို ဖန်တီးထားခဲ့လို့ပါပဲ ။သူ့အတွေးအခေါ်နဲ့ ပြောလိုရင်းတွေကို ဒီထဲမှာ အရှင်းသားတွေ့ရမှာပါ ။
အဓိက ဇာတ်ကောင် Meursault ဟာ အေးအေးဆေးဆေး နေတတ်သူ ၊ အပူအပင် မရှိတတ်သူ ၊ ဘဝမှာ လုပ်နေကြအရာတွေကိုပဲ ထပ်တလဲလဲ လုပ်ရင်းရှင်သန်နေသူ ၊ ဘာသာမဲ့သူ ၊ အမှားအမှန် မပြောတတ်တဲ့သူ ... စတဲ့ လူ ဖြစ်ပါတယ် ။
ဇာတ်လမ်းအဖွင့်မှာ သူ့အမေဆုံးသွားပြီ ဖြစ်တဲ့အတွက် အသုဘကို ‌လာရန် အကြောင်းကြားတဲ့ စာနဲ့ ဖွင့်ထားပါတယ် ။သူဟာ အမေ့ကို ချစ်ပါတယ် ။ဒါပေမဲ့ အမေဆုံးသွားလို့လည်း ဘာခံစားချက်မှ မရှိပါဘူး ။အသုဘမှာ အမေ့အလောင်းကို မကြည့်ဘူး ၊ မငိုဘူး ၊ ဘယ်သူနဲ့မှလည်း စကားမပြောဘူး ။အလောင်းမြေချနေတုန်း ကောင်းကင်က နေကြောင့် ပူနေတဲ့ ခံစားချက်ကပဲ သူ့ကို စိတ်အနှောက်‌အယှက်ပေးနေပါသေးတယ် ။
မြေချပြီးပြီးချင်းမှာ သူ့မြို့ကို သူပြန်လာတယ် ။‌ချစ်သူ Marrie နဲ့ အိပ်တယ် ၊ ပျော်တယ် ။ရုပ်ရှင်တွေကြည့်တယ် ။အိမ်နီးချင်းတွေနဲ့ ပတ်သတ်တယ် ။အလုပ်လုပ်တယ် ။အရာရာဟာ ပုံမှန်ပဲ ။သူ့အမေ မ‌ဆုံးခင်ကလည်း ဒီလိုပဲ ၊ သူ့အမေ ဆုံးသွားတော့လည်း ဒီလိုပဲ ။
ဘာမှ ပြောင်းလဲ မသွားဘူး ။
ဒီအပိုဒ်တွေမှာကတည်းက Meursault ရဲ့ စိတ်နေသဘောထားဟာ ဘယ်လိုလဲ ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ တွေ့လိုက်ရပါပြီ ။
နောက်ပိုင်းတွေမှာ ဇာတ်ရှိန်က ပိုမြင့်လာပါတယ် ။အဆုံးမှာ သူက လူတစ်ယောက်ကို အကြောင်းအရင်း မရှိဘဲ ၊ ရန်ငြိုးမရှိဘဲ သတ်မိလိုက်တယ် ။အဲ့ပြစ်ဒဏ်ကို အရင်းခံပြီး သေဒဏ်ကျခံလိုက်ရတယ် ။ဒါပဲ ။
ကျွန်တော်တို့ဟာ third person point of view ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကောင်ရဲ့ ခံစားချက်အတိုင်း ရေးဟန်ကို မြင်ရတဲ့အတွက် Meursault ရဲ့ စိတ်ဓာတ်ကို ၊ ခံယူချက်ကို သိနေနိုင်တဲ့အတွက် သူ့ကိုနားလည်ပေမယ့် တစ်အုပ်လုံးမှာရှိတဲ့ သူတွေကတော့ Meursault ကို နှလုံးသားမရှိသူ ၊ နတ်ဆိုးစိတ်ဓာတ်ရှိသူ အဖြစ်မြင်ကြတာကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
(က)တကယ်တော့ သူက ဘဝဆိုတာ လုပ်ဆောင်ဖွယ်ရာတွေ စီးဆင်းနေပေမယ့် ဘာမှ အဓိပ္ပာယ်မရှိသော ကိစ္စများမြောင်လို့ ခံယူထားသူသာ ဖြစ်ပါတယ် ။
အဓိပ္ပာယ်မဲ့ဝါဒ(Absurism) ခံယူသူလို့ ပြောနေရခြင်း ဖြစ်ပါတယ် ။
သေခြင်းတရားကိုလည်း သူဘယ်လို ခံယူထားသလဲ ပြောထားပါသေးတယ် ။
" မင်းမှာ မျှော်လင့်ချက် မရှိဘူးလား ။ဘာလဲ မင်းက လူတစ်ယောက် သေသွားတယ်ဆိုတာ သေသွားတာပဲ ဘာမှ ဟုတ်တာလဲ မဟုတ်ဖူးဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ ရှင်သန်တဲ့သူလား "
" အမှန်ပဲ " လို့ ကျွန်တော် ဖြေခဲ့တယ် ။ ။
"Have you no hope at all? And do you really live with the thought that when you die, you die, and nothing remains?"
ဒီတော့ သူ့‌အမေရဲ့ သေဆုံးခြင်းမှာ သူ မငိုတာ အဆန်းမဟုတ်ပါဘူး ။
(ခ)ဒါပဲလားဆိုတော့ မဟုတ်ဘူး ။ အရာရာတိုင်းမှာ
သူဟာ စိတ်ဝင်စားမှုမရှိဘူး ။
ချစ်သူ ဖြစ်သူ Marrie က သူမကို ချစ်သလားလို့ မေးတဲ့ အမေးမှာတောင် ငါ မသိဘူးလို့ ဖြေခဲ့သူ ဖြစ်တယ် ။
တရားသူကြီးတွေ ၊ ခရစ္စယာန်ဘုန်းကြီးတွေက ဘုရားသခင်ကို ယုံသလား မေးတဲ့ အမေးကိုလည်း မယုံဘူးလို့ ဖြေခဲ့သူ
ဘေးပတ်ဝန်းကျင် လူတွေက ကိစ္စတစ်ခုလို မင်းဘယ်လိုထင်လဲလို့ မေးတဲ့အရာခါမှာလည်း မသိဘူး ၊ မပြောတတ်ဘူးလို့ ဖြေခဲ့သူ ဖြစ်တယ် ။
Meursault ဟာ ဘယ်လုပ်ရပ်က မှားတယ် ၊ မှန်တယ်ဆိုပြီး ဝေဖန်ပိုင်းခြားမှု မရှိသူသာ ဖြစ်တယ် ။
(ဂ)နောက်တစ်ခုက Meursault ဟာ အာရုံခံစားသူ(Sensualist) တစ်ယောက်သာ ဖြစ်ပါတယ် ။ကာမဂုဏ်တွေ ၊ ရမ္မက်တွေကိုသာ သိသူလို့ ပြောရင်လည်းရပါတယ် ။
(ဃ)ဒီစာအုပ်မှာ အများဆုံးပါတဲ့ အရာတွေက
ငါ မသိဘူး ၊ မပြောတတ်ဘူး ၊ ဘယ်အရာကမှ အရေးပါတာ မဟုတ်ဘူး ဆိုတဲ့ စာသားတွေ ဖြစ်ပါတယ် ။
ဒါကြောင့်မလို့ အမေဆုံးတာ ၊ ပတ်ဝန်းကျင်က လူတွေ ပျော်ရွှင်ဝမ်းနည်းနေတာ ၊ နောက်ဆုံး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သေဒဏ်ကျခံနေရပြီမှန်း သိနေတာတောင် ဇာတ်ကောင်ဟာ တုန်လှုပ်ခြင်း မရှိခဲ့ပါဘူး ။
ဖတ်နေသူ ကျွန်တော်တို့မှာသာ သူ့လို စိတ်မထားနိုင်ဘဲ မတင်မကျနဲ့ ဖြစ်ကျန်နေခဲ့ရပါတယ် ။
(င) ၁၉၅၅ ခုနှစ်တုန်းက ဒီစာအုပ်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ကမူးက ဒီလိုပြောခဲ့ပါတယ် ။
" ကိုယ့်အမေရဲ့ အသုဘမှာ ငိုကြွေးခြင်း မရှိခဲ့တဲ့သူဟာ သေဒဏ်ကျခံရဖို့ အခွင့်အရေးနဲ့ ရှင်သန်နေသူသာ ဖြစ်တယ် " တဲ့ ။
" A man who doesn't cry at his mother's funeral runs the risk of being sentenced to death "
လူတစ်ယောက်လေး သတ်ရုံအတွက်နဲ့ သေဒဏ်ကျထိုက်ရဲ့လားလို့ မေးစရာရှိတယ် ။
ဒီထဲမှာ အမေ့ အသုဘမှာ ဝမ်းနည်းခြင်းမရှိခဲ့တာကပဲ သေဒဏ်ကျခံရဖို့ ဖြစ်လာကြောင်း ဖော်ပြချက်တွေ ရှိနေတယ် ။
ကျွန်တော့်မှာတော့ သာမန်ပဲနေမှာပါ တွေးခဲ့တာ ဒီလောက်ထိ မထင်ထားခဲ့ဘူး ။ကျွန်တော့် စိတ်တွေ ရူးနှမ်းမတတ်ပဲ ။
(၄)စာအုပ်ထဲမှာပါဝင်‌သော သင်္ကေတ တချို့
သာမန်လူ့ဘဝတွေကို ညွှန်းဆိုတယ် ၊ ရိုးရာတွေ ၊ လုပ်ငန်းတွေကို ကိုယ်စားပြုတယ် ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အဓိက ဇာတ်ကောင်ဟာ တရားရုံးရဲ့ ချမှတ်ထားမှု စည်းကမ်းတွေကို ဖောက်ဖျတ်ခဲ့သူ ဖြစ်တယ် ။
တနည်းအားဖြင့် သူ့ခံယူချက်တွေဟာ နေ့စဉ်ဘဝမှာ သာမန်လူတွေအဖို့ ကသိကအောက်ဖြစ်စေတဲ့ အရာတွေသာ ဖြစ်တယ် ။
အရှင်းကြီးပါပဲ ။ဘာသာရေးကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ လက်ဝါးကပ်တိုင်ကို ရှောင်ဖယ်ခဲ့ကြောင်း ပြလိုက်တဲ့ ဇာတ်ကောင်ဟာ ဘာသာရေးကို အယုံအကြည်မဲ့တယ်လို့ ပြောခဲ့သူ ဖြစ်တယ် ။
ဂ ။နေနဲ့ ပင်လယ်(Sun and Sea)
နေဟာ ပူလောင်ခြင်းတွေကို ကိုယ်စားပြုတယ် ။ဇာတ်ကောင်ဟာ လူဘာ့ကြောင့် သတ်သလဲဆိုတဲ့ အမေးကို ဒီလိုဖြေခဲ့ပါတယ် ။
" ကျွန်တော့် ခေါင်းပေါ်မှာ ထိုးနေတဲ့ နေက အင်မတန်ပူနေလို့ပါ " တဲ့ ။
ပင်လယ်ဟာ အေးမျှခြင်းကို ကိုယ်စားပြုပါတယ် ။ဇာတ်ကောင်ဟာ ရေကူးကန် (သို့) ပင်လယ်ကို သွားပြီး ပျော်မွေ့တတ်သူ ဖြစ်ပါတယ် ။တနည်းအားဖြင့် သူ့ဘဝရဲ့ ပူပန်မှုတွေကို ရေနဲ့ ဖြေဖျောက်သလို ပါပဲ ။
(၅)စာအုပ်ပါ ဆိုလိုရင်း သို့ ရည်ရွယ်ချက်များ
က ။အဓိပ္ပာယ်မဲ့သောဘဝ(Meaningless,Detached life)
စာရေးသူက သူ့ဇာတ်ကောင်ကို ဒီလိုပြောခဲ့ပါတယ် ။
" အမှန်တရားအတွက် သေဆုံးရဲတဲ့သူ ... အဲ့လိုလူသာလျှင် ကျွန်တော်တို့ လိုအပ်တဲ့ ခရစ်တော် ဖြစ်တယ် " တဲ့ ။
A man who agrees to dies for the truth...the only Christ we deserve.
ခ ။လူ့ဘဝဆိုတာ(Physical life)
Meursault ရဲ့ ခံယူချက်လိုပဲ ဘဝဆိုတာ ခံစားမှုအာရုံ ၊ ကာမဂုဏ်ကိစ္စတွေကိုသာ စံစားဖို့ နေထိုက်တယ် ။
ဂ ။ဆက်သွယ်မှု လွဲမှားခြင်း(Miscommunication)
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဇာတ်ကောင်ဟာ သူ့ဘဝသူ အေးဆေး နေထိုင်လိုသူသာ ဖြစ်ပါတယ် ။သူ့မှာ အရာရာတိုင်းအတွက် ပြောလိုတဲ့ ခံစားချက်မရှိပါဘူး ။ရှင်သန်ဖို့အတွက် ၊ သေဖို့အတွက် ၊ ပျော်ဖို့အတွက် ၊ ဝမ်းနည်းဖို့အတွက် ဘာမှ မရှိပါဘူး ။
အဲ့တာကို တခြားသူတွေ အမြင်မှာတော့ ဒီလူဟာ နှလုံးသားမဲ့ ၊ နတ်ဆိုးဝါဒီ လူသားတစ်ယောက်ဆိုတဲ့ အမြင်ပေါက်သွားပါတယ် ။ဒါဟာ လွဲမှားနေမှု အကြီးကြီးဖြစ်ပါတယ် ။သူသေသွားတာတောင် ဘယ်သူမှ သူ့ခံယူချက်ကို သဘောပေါက်သွားသူ မရှိပါဘူး ။
ဒီစာအုပ်ဟာ ဂန္တဝင်တစ်ရာထဲမှာ ပါပါတယ် ။ဖတ်သင့်ပါတယ် ။ဖတ်ထိုက်ပါတယ် ။‌ပြောဆိုသင့်ပါတယ် လို့ မြင်ပါတယ် ။ကြိုက်တာ ၊ မကြိုက်တာက တစ်ဦးစီ အမြင်ပါ ။
Franz Kafka ရဲ့ စာအုပ်တွေ ဖတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာ ကမူးရဲ့ စာအုပ်ကို ဖတ်လိုက်ရတဲ့ အတွက် ဖြေရှင်းချက်တစ်ခု ရသွားသလို ခံစားခဲ့ရပါတယ် ။
Franz Kafka ဟာ ဘဝရဲ့ အခက်အခဲဆုံး ကိစ္စတွေ အထူးသဖြင့် ဘာလို့ ရှင်သန်နေကြရ ၊ ပင်ပန်းနေကြရတာလဲ ဆိုတဲ့ ကိစ္စတွေနဲ့ စာတွေ ရေးခဲ့တာကို ၊
Albert camus က ကြတော့ အရာရာဟာ အဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးဆိုတဲ့ အပြော ပြောခဲ့တဲ့အတွက် ၊ ကျွန်တော့်မှာ တည်ငြိမ်မှုတွေ ရခဲ့ပါတော့တယ် ။
မြန်မာ ဘာသာပြန်အနေနဲ့ ထင်လင်းက စည်းအပြင်ကလူဆိုပြီး ရေးထားပါတယ် ။
၁ ။ထင်လင်း - စည်းအပြင်ကလူ
အင်္ဂလိပ်လို ဖတ်ချင်သူ အတွက်လည်း ချပေးလိုက်ပါတယ် ။ဒီဘာသာပြန်ထား‌တာလေးက သိပ်မခက်ခဲလို့ပါပဲ ။ကျွန်တော် ဖတ်ခဲ့တဲ့ ဟာလေးပေါ့ ။
၂ ။ The stranger By Albert Camus